Yegüas | Soavaly Noti
ny tena ilaina ny mares Amin'ny famokarana ny bibintsika dia tsy maintsy jerentsika amin'ny antsipiriany maro ny maha-mpiompy azy ireo na tsy misy intsony. Miankina amin'ny zavatra tadiavintsika amin'ny biby izany.
Ao amin'ity habaka ity no hahitanao izay rehetra mifandraika amin'ny mares ary inona no ifandraisany amin'izy ireo, aretina, torohevitra ary lava sns. Izany dia hahafahantsika hahafantatra bebe kokoa momba ireo biby ireo.
Aza adino izany raha tsy misy azy ireo dia tsy hanana foals isika, noho izany dia tsy maintsy mikarakara manokana azy ireo foana isika. Ny fampahalalana rehetra dia tsara, raha mbola mifanipaka mazava tsara, fa mety mahasoa antsika ny mikarakara ny maraintsika.
Ny iray amin'ireo toe-javatra tsara indrindra ho an'ireo mpitia soavaly dia ny fiterahana mba hampiakarana zanak'omby ...